Man City Oo Indhaha Ku Haysa Xiddiga Qadka Dhexe Ee Leeds Phillips
HomeWararka CiyaarahaMan City oo indhaha ku haysa xiddiga qadka dhexe ee Leeds Phillips
September 13, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Manchester City ayaa si weyn u xiiseyneysa inay soo xerogeliso xiddiga qadka dhexe ee England Kalvin Phillips oo ka tirsan Leeds United .
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee difaaca ayaa arkay saamigiisa oo sare u kacay tan iyo bandhigiisii ​​cajiibka ahaa ee Seddexda Libaax ee Euro 2020 xagaagii.
Sida laga soo xigtay wargeyska Isbaanishka Fichajes , City hadda waxay ku jirtaa tartanka loogu jiro saxiixa Phillips, iyadoo wax kasta oo la kala iibsanayo ay u badan tahay inuu dhaco xagaaga soo aadan.
Tababare Pep Guardiola ayaa doonaya inuu booskaas ku sugo kooxdiisa mustaqbalka fog, maadaama halyeeyga Fernandinho uu galayo dhammaadka mustaqbalkiisa ciyaareed.
Phillips ayaa sidoo kale laga yaabaa inuu bartilmaameed u noqdo Real Madrid , oo lala xiriirinayay 25 jirkaan intii lagu jiray suuqii xagaaga ee dhowaan la dhaafay.